Madaxwayne Faroole oo jeediyay khudbad muhiim ah balse aanan taaban qaddiyado muhiim ah oo laga filayay. – Radio Daljir
Madaxwayne Faroole oo jeediyay khudbad muhiim ah balse aanan taaban qaddiyado muhiim ah oo laga filayay.
Garoowe, August 02- Madaxwaynaha dawladda Puntland ayaa xalay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay xaflad lagu maamusayay sannad-guuradii 13-aad ee ka soo wareegtay asaaskii Puntland.
Khudbad socotay 55 daqiiqo ayuu madaxwayne Cabdiraxaman Maxamed Faroole waxa uu faahfaahin ka baxiyay dabeecadda heshiis nabadayn ah oo ay Puntland la waddo odayaasha dhaqanka ee Cal Madow. Waxa uu sheegay in odayashu ay go’aansadeen in ay degaankooda u doonayaan nabad, isla markaana ay go’aansadeen in ay ka saarayaan dadka ka soo duulay dibadda Puntland.
Dawladda Puntland ayaa sannadkii la soo dhaafay buuraha Galgala dagaal adag kula gashay kooxo xag-jir ah oo uu hogaaminayay Sheekh Maxamed Siciid Atam, halaas oo ugu dambayntii lagu jabiyay kooxahaas. Si kastaba ha ahaatee intii xilligaa ka dambaysay dhowr jeer ayay kooxahaasi weeraro gaadmo ah ku qaadeen fariisimo ay ciidamadu ku leeyihiin aagaas.
Madaxwayne Faroole oo qaybo kala duwan khudbaddiisa u kala dhigay ayaa waxa uu sidoo kale ka hadlay arrimo uu ku tilmaamay in ay yihiin caqabado hortaagan horumarka iyo geedi-socodka Puntland. Dagaalka qabaa’ilka iyo guud ahaan dhaqanka qabaliga ah, burcad-badeedda, abaaraha soo noq-noqda, xag-jirnimada, caddaaladda, xiriirka federaalka, ciriiriga dhaqaale iyo arrimo kale oo badan ayuu madaxwayne Faroole waxa uu sheegay in ay qayb ka yihiin caqabadahaas iyaga ah.
Mar uu ka hadlayay aminga, ayuu madaxwayne Faroole sheegay in muddo Koonfurta Soomaaliya laga soo dhoofinayay argagixiso lagu wiiqayo ammaanka Puntland, waxana uu sheegay in dadka dililka ka fuliya Puntland ay kaliya dilaan dad “malagoodii galay” balse ayan Puntland u joojineeyn geeddi-socodka ay ugu jirto barnaamijkeeda horumarinta oo uu ku tilmaamay mid si joogto ah u socon doona.
Madaxwayne Faroole waxa uu ka halday dagaalka qabaliga ah oo uu sheegay inuu isugu jiro mid dhaqan oo waligi ahaan jiray – balse haatan u xuub-siibtay mid la isku adeegsado hubka noociisa culus – iyo qaar siyaasad salka ku haya. Waxa uu tusaale u soo qaatay colaadda Kob-dhexaad iyo sida ay dawladdu ugu heellantahay. Madaxwaynuhu waxa uu sheegay in uu haatan Kob-dhexaad ku sugan yahay wasiirka Amniga Khaliif Ciise Mudan iyo waliba ciidamo aad u badan, madaxwaynaha ayaa ku cattaabay in kala-celinta qabaa’ilku ay ka mashquuliso dawladda arrimaha horumarinta, waxana uu tusaale u soo qaatay in ay haatan ku maqan yihiin Kob-dhexaad ciidamadii difaaca halkii ay ku maqnaan lahaayeen difaaca dalka.
Burcad-badeedda ayuu sheegay in ay khatar ku yihiin ammaanka iyo dhaqanka, waxana uu beesha caalamka ugu baaqay in ay dawladda gacan ka siiyaan sidii wax looga qaban lahaa. Waxa uu xusay in goobaha qaar, sida ay Eyl, burcaddii looga nadiifiyay iskaashi dhex-maray dawladda iyo shacabka, waxana uu sheegay in haatan barnaamijiyo horumarineed laga fulin doono magaalooyinka ku guulaysta in ay iska nadiifiyaan burcad-badeedda.
Madaxwayne Faroole waxa uu sheegay in xukuumaddiisu qorsheeynayso in ay dhisto goobo lagu dhaqan-celiyo burcad-badeedda, taasoo lagu kaabayo dagaalka ay xukuumaddiisu kula jirto burcad-badeedda.
Abaaraha Soomaaliya ka taagan ayuu markale madaxwaynu ugu baaqay in dadka reer Puntland ay samafal ka gaystaaan gacanna la gaaraan dadka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan Koonfurta Soomaaliya iyo kuwa ku jira xeryaha ka dhisan Puntland.
Madaxwayne Faroole ayaa markii uu kahadlayay caddaaladda waxa uu qiray in uu halkaas wali nuqsaan ka jiro inkasta oo uu tilmaamay ahamiyadeedda iyo sida ay uga go’an tahay in uu daboolo baahidaas. Waxa uu xusay in aqoon la’aantu tahay sababta keentay nuqsaantaas isaga oo sheegay in ay dadkii aqoontu u lahaa baahidaas ay dalka ka maqan yihiin.
Arrimaha Federaalka iyo xiriirka labada dhinac ayuu ku sheegay in ay mushkiladi ka jirtay, waxana uu markale ku celiyay baaqiisii ahaa in shirka dib-u-heshiisiinta lagu qabto magaalada Garoowe oo uu ku sheegay in ay tallaabadaasi daawo u noqon doonto mushkiladda Soomaaliya guud ahaan.
Caqabadahaas tirada badan ayuu madaxwayne Faroole waxa uu sheegay in ay daawadoodu tahay amniga iyo midnimada oo la adkeeyo, sifo taa loo gaarana loo baahan yahay in ay bulshada Puntand isku tashato sidii ay u horumarin lahayd dhaqaalaha. Waxa uu ku booriyay dadwaynaha reer Puntland in aybartaan dhaqanka canshuur-bixinta una hoggaansamaan, isaga oo dhinaca kalena ammaanay kaalinta qurba-joogta Puntland ku leeyihiin kobaca dhaqaalaha iyo horumarka ka jira Puntland.
Dadka naqdiya siyaasadda dawladda ayaa sheegaya in madaxwayne Faroole laga eegayay in uu khudbaddan muhiimka ah, taariikhigana ah uu ku soo qaado xaaladda gobolka Sool iyo caasimaddiisa Laascaanood oo sannadihii la soo dhaafay ku jiray gacanta Somaliland, isla markaana uu soo bandhigo siyaasadda rasmiga ah ee xukuumaddiisa uga taal qaddiyadda gobolka Sool oo ka mida kuwii wax ka dhisay maamulka Puntland ee haatan loo dabaal-dagayo 13 guuradiisii.